Sida Loogu Kordhiyo Wakaaladaada Iskuduwaha Dukaankaaga Shopify | Martech Zone
Marna ha siin aqoonsi gelitaankaaga aaladahaaga hay'addaada. Waxaa jira waxyaabo aad u badan oo khaldami kara markaad sidan samayso - laga bilaabo furaha sirta ah si aad u hesho macluumaad aysan ahayn inay helaan. Inta badan aaladaha maalmahan waxay leeyihiin habab loogu daro isticmaaleyaasha ama la -shaqeeyayaasha madashaada si ay u yeeshaan awoodo xaddidan oo laga saari karo marka adeegyada la dhammeeyo.
Soo iibso tan si fiican u sameeya, iyada oo loo marayo helitaanka wada -hawlgalayaasha ee shuraakada. Faa'iidada wada -hawlgalayaashu waa inaysan ku darin tirinta isticmaale shati haysta ee dukaankaaga Shopify, sidoo kale.
Samee Soo -Dukaan Helitaan Wada -shaqeeye
Sida caadiga ah, qof kastaa wuxuu codsan karaa marin u noqoshada iskaashi goobtaada Shopify. Waa kan sida loo hubiyo dejintaada
U soco Settings.
U soco Isticmaalayaasha iyo Ogolaanshaha.
Halkan waxaad ka heli doontaa a Wada shaqeynta qaybta. Dejinta caadiga ah ayaa ah in qof kasta uu diri karo codsi iskaashi. Haddii aad jeclaan lahayd inaad xaddiddo kuwa codsada helitaanka iskaashatada, waxaad kaloo samayn kartaa koodh codsi oo ah ikhtiyaar.
Intaas uun baa ku jirta! Dukaankaaga Shopify waxaa loo aasaasay inuu ka helo codsiyada wada -shaqeeynta wakaaladdaada oo laga yaabo inay ka shaqeyneyso nuxurka, mowduucyada, qaabeynta, macluumaadka badeecadda, ama xitaa isku -darka.
Wakaaladdaadu waxay u baahan tahay in loo sameeyo sidii Iibso Iskaashatada ka dibna waxay codsanayaan marin habaabiyaha iyagoo galaya URL -kaaga dukaanka Shopify (gudaha) iyo dhammaan rukhsadaha ay u baahan yihiin:
Marka wakaaladdaadu dirto codsigooda wada -shaqaynta, waxaad heli doontaa iimayl aad ku eegi karto oo aad ku siin karto oggolaansho. Markaad oggolaato gelitaanka dukaanka, way shaqaysan karaan!
Tags: helitaanka wakaaladdawada shaqeynAqoonsiyadadukaankaDukaamee iskaashiIibso lammaanahaIibso lamaanayaashaDukaamee isticmaaleDukaamee oggolaanshaha isticmaalahaDukaamee adeegsadayaasharukhsadaha isticmaalaha